National Security Defense Office na ngalaba anọ ndị ọzọ jikọrọ ọnụ wee rụọ ọrụ pụrụ iche na njikwa nke isi ọkụ ọhịa na nyocha na ntaramahụhụ nke ọrịa ...
Iji chịkwaa nke ọma na isi iyi ọkụ, na-enyocha ma na-ata ahụhụ ọkụ ọkụ na-akwadoghị, ma belata ihe ụmụ mmadụ na-akpata oke ohia na ahịhịa, Prelọ Ọrụ Mgbochi Ọhịa National, State Forest and Grassland Administration, Ministry of Public Security, na Minist. ..
Dabere na ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu, ọtụtụ ihe mberede ọkụ ọkụ na-akpata site na ikuku gas. Ọ bụrụ na achọpụta ọhụụ ahụ tupu oge eruo, enwere ike iwepụ ihe egwu dị na nzuzo n'oge. Tụkwasị na nke a, ịmịpụ gas ga-emebi mmebi ikuku, nke na-ewe oge na ...
Beijing topsky sonyere na mmemme mmeghe nke mongolia kwụ ọtọ mpaghara nchekwa ọnwa.
Ka ọnwa Juun dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ, arụ ọrụ ‘Autonomous Region’s 2018‘ Safety Production Month ’nke emere na Ulan Qab. Ọ bụ nke iri na asaa "Nchekwa ọnwa nke ọnwa" na mba ahụ, isiokwu nke ihe omume ahụ bụ "Life First, Development Development" Na isi ebe mgbakọ nke "S ...
Abụọ abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ extinguishing ngwaọrụ, nemesis nke chemical ọkụ
Backpack abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ ngwaọrụ Site na ọganihu ngwa ngwa nke usoro mmezi ihe, ọnọdụ ọkụ na-esiwanye ike. Karịsịa, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mmanụ ala na-ezute ọtụtụ ihe mberede na usoro mmepụta kwa ụbọchị. Otu ugboro ihe ojoo ch ...
Nkọwa zuru ezu nke akụrụngwa dị oke mkpa maka nnapụta mmiri dị ka ígwè ọrụ mgbanaka mmiri na-achịkwa mmiri, ike ọkụ ndụ, wdg.
Azụmahịa Ọdachi Ọdachi bụ otu n'ime ọdachi ndị na-emere onwe ha na mba anyị. Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ndị mmadụ nwere ọtụtụ mgbochi. Ọnụọgụ nke ụlọ dara ada na ọnwụ n'ihi idei mmiri na mba m n'ozuzu na ...